लाखौँमा एक हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, चुट्कीमै मिल्छ हर काममा सफलता – Sandesh Press
लाखौँमा एक हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, चुट्कीमै मिल्छ हर काममा सफलता
June 9, 2021 306
काठमाडौँ । कम उमेरमै धनि बन्छन् यी राशि भएका व्यक्ति यो सांसारिक जीवनमा सबै मानिस चाँडै धनी हुन चाहन्छन्।सबैजना द्रुत रूपमा सम्पत्ति कमाउन र सबै भौतिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न चाहन्छन्।
प्रायः तपाईंले याद गर्नु भएको छ होला केहि व्यक्तिहरूले कम उमेरमा सफलता प्राप्त गर्दछन्। उनीहरू अरू भन्दा चाँडो धन र प्रसिद्धि प्राप्त गर्दछ।
जबकि धेरै व्यक्तिहरुलाई यस्तो सफलता प्राप्त गर्न धेरै लामो समय लाग्छ। ज्योतिषका अनुसार यी चार राशिका मानिस छन् जसले सानै उमेरमा आर्थिक सफलता पाउँछन्। यी व्यक्ति परिश्रमी हुनुका साथै, भाग्यले पनि पूर्ण साथ दिन्छ।
वृष राशिः वृष राशिका व्यक्तिहरूले विलासी जीवनको लागि छिट्टै अवसरहरू फेला पार्दछन्। वास्तवमा, यस राशिका व्यक्तिहरू स्वभावले पनि सांसारिक सुखविलासलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यो राशिको स्वामी शुक्र ग्रह हो, जुन सबै प्रकारका भौतिक आनन्दहरूको कारक हो।
यस राशिका जातक कलामा दक्ष हुन्छन् र उनीहरूको कडा परिश्रमको आधारमा, उनीहरू सफलताको सिढीमा धेरै चाँडो चढ्न सफल हुन्छन्।
कर्कट राशिः कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरुको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको उनीहरूको कडा परिश्रम हो। यी व्यक्ति आफ्नो परिवारको खुशीको लागि कडा परिश्रम गर्छन् र सफलताको उचाइ छुन्छन्।
यिनीहरू आफ्नो कडा परिश्रमको कारण जीवनमा प्रारम्भिक सफलता प्राप्त गर्छन्। यी व्यक्तिहरु आफ्नो प्रियजन र उनीहरुको खुशीको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। कर्कट राशिका व्यक्ति धेरै भावुक हुन्छन्। चन्द्रमा यस राशिको स्वामी हो’।
सिंह राशिः सिंह राशिको स्वामी सूर्य हुन् जसले राजा, नेता, उच्च अधिकारी दर्शाउँछ। यस राशिका जातकसँग राम्रो नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। यिनीहरू आफ्नो नेतृत्वको कारण चाँडै सफलताको चरम सीमामा पुग्न सफल हुन्छन्।
यी व्यक्ति भीडमा आफ्नो छाप छोड्न र अरूबाट अलग देखिन चाहन्छन्। सिंह राशिका जातक चाहन्छन् कि मानिसहरूले उनीहरुलाई याद गरून्, प्रशंसा गरून् र उनीहरलाई आफ्नो आदर्श मानुन्। त्यसकारण,यी मानिस जीवनमा कडा परिश्रम गर्छन् र अगाडि बढ्न सफल हुन्छन्’।
वृश्चिक राशिः वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरू चाँडै सफलता प्राप्त गर्छन्। यिनीहरुमा भौतिक चीजहरूको लागि ठूलो स्नेह हुन्छ र यो इच्छा पूरा गर्न कडा परिश्रम गर्छन्। गाडी(बंगला र आरामका अन्य चीजहरूप्रति यी व्यक्ति चाडै आकर्षित हुन्छन्। यो सबै प्राप्त गर्न निकै कडा परिश्रम गर्छन् र सफलता प्राप्त गर्छन्’।
PrevExclusive: सविताको कपडा देखाउदै आमा भक्कानिदै रोईन, मञ्जु खाँडलाई सम्हाल्न गाह्रो…
Nextयी दुई राशिबीच कहिल्यै सफल हुँदैन प्रेम र विवाह
चर्चित नायिकाको निधन, लडेको कि आ’त्मह’त्या?
चन्द्रमामा पृथ्वीको छाँया पर्ने गरि ५८० वर्षपछि भोलि लाग्दै छ सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण, कतिबेर रहन्छ ?
देशभर तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
यी राशिका व्यक्तिलाई सुन लगाउँदा हुन्छ शुभ, कुन राशिलाई कुन धातु शुभ ?
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (10858)
अन्तत प्रियंकाले दिइन् छोरीलाई जन्म? (10420)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (7301)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (7249)
भर्खरै सम्पूर्ण काठमाडौंबासीका लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर। (6211)
दुर्गेश थापाको आक्रोश: पल शाहले राति २ पटकसम्म क,*ण्ड*म नलगाइ जबरजस्ती गरेकै हो ..! (4742)
पल शाहले हिरासत बाटै लेखे आमालाई सन्देश, (4590)
फ्यानबाटै लखेटिइन् गायिका रचना रिमाल (4392)
अब खाना पकाउने ग्यास ११२० रुपैयाँमै पाइने! (3806)
“सबैको समर्थन देखेर मेरो हिम्मत बढेको छ, म यो लडाइँबाट हट्ने छैन ” गायिका समिक्षा (3708)
फेरी समीक्षा अधिकारीले तक्दिरमा नभए पनि दिल बसेको कुरा गरिन सार्बजनिक (भिडियो सहित )
कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै नराखे अब काठमाडौं महानगरले कारबाही गर्ने
पहिलो दिनमै कबड्डी ४ ले बनायो कीर्तिमान
नुवाकोट आए बालेन, गरे मनछुने घोषणा